Monty Hall Problem | Win Naing Lay
Posted on December 25, 2008 by aungkyawsan
Monty Hall Problem ရဲ့ အစကို 21 ဆိုတဲ့Movie ကြည့်ရင်းကတွေ့ပြီးစိတ်ဝင်စားလို့ မျှ ဝေလိုက်ပါတယ်..
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှ Professor ကကျောင်းသားတွေကို မေးပါတယ်…
Game Show တစ်ခုမှာ..ဖြစ်ပါတယ်..
“He says that there are three doors – behind one isacar and behind the other two are goats. The contestant picks door A. At this point, the contestant hasa0.33 chance of winningacar (anda0.66 chance of getting stuck withagoat). The host reveals that there isagoat behind door C. He then gives the contestantachance to change his decision. Now, in the movie, they say that the contestant should switch to door B because there isa0.66 chance that there isacar there (as opposed to the unchanged 0.33 chance in sticking with door A). I understand how they reached that conclusion, but I disagree with it. When the host reveals that there isagoat behind door C, wouldn’t that ‘extra’ 0.33 chance be divided between A and B equally rather than just all going to door B?”
ဒီပြသနာရဲ့မူလအစကတော့ အမေရိကန် TV Game Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Let’s makeadeal” က ဖြစ်ပြီး၊တင်ဆက်သူ Monty Hall ကို အစွဲပြုပြီး၊ Monty Hall Problem လို့ ထင် ရှားပါတယ်၊၊
ဒီပြသနာကို Parade Magzine က အခုလိုတင်ပြထားပါတယ်၊၊
တယ်ကိုပဲအငြင်းပွားဖွယ်ရာကောင်းသော၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များ၊ယူဆချက်များဖြစ်တဲ့အတွက်၊ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်ပါ web link များမှာ ဆက်လက်လေ့လာစူးစမ်းနိုင်ကြပါတယ်၊၊
« A Very Special Meal နိုင်ငံတကာပညာရေး တစ်စေ့တစ်စောင်း »